Yangon-Bangkok (1Night 2Days)
Day(1) Bangkok လေဆိပ်မှ Hotel သို့ပို့ဆောင်ပါမည်။ နေ့လည်စာစားပြီး Royal Grand Palace နှင့် မြဘုရားသို့သွားရောက်ဖူးမြော်ပါမည်။ ထို့နောက် Bangkok မြို့ထဲသို့ လည်ပတ်ရင်း ဈေးဝယ်ထွက်ပါမည်။ ညနေအချိန် Chao Phraya မြစ်တွင် သင်္ဘောစီးပြီး ညစာသုံးဆောင်ကာ နေ၀င်ချိန်ကြည့်ရှုပါမည်။ ထို့နောက် Hotel သို့ပြန်လာပါမည်။ Day(2) မနက်စာစားပြီး Safari နှင့် Marine Park သို့သွားပါမည်။ ထို့နောက် Bangkok လေဆိပ်သို့ ပြန်လည် ပို့ဆောင်ပါမည်။ Price Quotation 250 U$ (Per Pax) Best Care Travel Myanmar ၏ ခရီးစဉ်တွင် ပါဝင်သော ဝန်ဆောင်မှု ၁။ ခရီးစဉ်တစ်လျှောက် Aircon Tour ကားဖြင့် ကြိုပို့ပေးခြင်း ၂။ ခရီးစဉ်တွင် ဖေါ်ပြထားသည့်အတိုင်း မနက်−နေ့−ညစာ ၃။ ခရီးစဉ်တွင်ပါဝင်သော လည်ပတ်သည့် နေရာများအတွက် ဝင်ကြေး ၄။ အင်္ဂလိပ်စကားပြော Tour Guide ၅။ ကုမ္ပဏီမှ Tour Leader ၆။ *** Star ဟိုတယ် အခန်းခ (၂ယောက်တစ်ခန်း တည်းခိုရပါမည်) ။ Extra bed အတွက် သီးသန်ပေးချေရပါမည်။ ခရီးစဉ်တွင် မပါဝင်သော ဝန်ဆောင်မှု ၁။ လေယာဉ်ခ နှင့် လေယာဉ် ဝန်ပိုသယ်ဆောင်စရိတ် ၂။ ရေသန့် ၊ အဖျော်ယမကာ၊ အချိုရည် ၃။ ဟိုတည်တည်းစဉ် Minibar, Room Service, Phone Charges, Laundry Charges ၄။ Best Care ၏ ၀န်ဆောင်မှုဟုဖော်ပြမထားသော အခြားသော ၀န်ဆောင်မှုများ၏ စရိတ်များ မှတ်ချက် ၁။ Passport ရရှိရန်အတွက် လိုက်ပါဆောင်ရွက်ခ သီးခြားပေးရပါမည်။ အချိန် (၁၀) ရက်ခန့် ပေးရပါမည်။ ၂။ ခရီးစဉ်လိုက်ပါရန် သဘောတူညီပါက စရံငွေ U$ (100) ပေးချေရမည်။ (စရံငွေ ပြန်မအမ်းပါ။) Best Care Travel Myanmar ဧည့်သည် များအနေဖြင့် Company ၏ ဖုန်းနံပါတ်များကိုသာ တိုက်ရိုက်ဆက်သွယ်ခြင်းမရှိဘဲ ဝယ်ယူထားသောကြော့င် ပေါ်ပေါက်လာသောငွေကြေး အရှုပ်အရှင်းများ၊ ခရီးစဉ်မှားယွင်းခြင်းများကို ကုမ္ပဏီမှ (လုံးဝ ၊ လုံးဝ) တာဝန်ယူဖြေရှင်းပေးမည် မဟုတ်ကြောင်း အသိပေးအပ်ပါသည်။ Best Care Travel Myanmar A-002, Landmark Tower, Shwe Gon Plaza Compound, Shwe Gon Daing, Bahan Township, Yangon Phone- 09-43085738, 09-43202858, 01-559160, 01-552590, 01-552587 E-mail : bestcaremyanmartravel@gmail.com Web-mail : office@bestcaretravelmyanmar.com *** ပြည်တွင်းပြည်ပ လေယာဉ်လက်မှတ်မျိုးစုံ ဝယ်ယူရရှိနိုင်ပါသည်။...
Posted by BCadmin in Trip Plan | Comments Off on Yangon-Bangkok (1Night 2Days)
Day-1 Arrive Yangon and Explore around Yangon. Reclining Chauk Htet Kyi Pagoda, National Museum, Sule Pagoda and take heritage tour around downtown. Shopping at Bogyoke Market. Visit Shwedagon Pagoda. Day-2 Early flight to Mandalay. Drive to Mahagandayon monastery to participate in offering food to 1000 monks. Proceed to U Bain Bridge then visit Kuthodaw pagoda, Shwe Nan Daw Monastry, Mahamyat Mu Ni Pagoda, shop at local product distribution market Zay Cho. Sunset at Mandalay Hill. Day-3 Take Malikha cruise at Shwe Kyet Yet, cruise down to Yandabo village. Visit typical village on Ayeyarwaddy river bank & observe pottery making process. Arrive Bagan & overnight in Bagan. Day-4 Sightseeing in Bagan for the whole day including, Ananda Temple, U Pali Thein, Manuha Temple, Nan phayar, Gubyaukyi & Thabyinnyu & others. Visit Shwe Pyi Nan Myanmar cosmetic factory & museum. Lacquer ware houses. Watch sunset at Buu Pagoda. Day-5 Take flight back to Yangon & Transfer Yangon International airport for...